Axmad Madoobe; calal beel iyo ciidan shisheeye yaa daran?! – Bashiir M. Xersi
Axmad Madoobe; calal beel iyo ciidan shisheeye yaa daran?!
Date: 14 Jan 2016Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Iscaabixi, waliba is ku caanbixi wax aadan ku caanbixi karin, balse, caammada iyo inta qabiilka u qabbiran, ee qabyaaladdu dilootay ay kuugu qiiliyaan. Qardajeexid, qoorismarinnimo siyaasadeed, indhasarcaadin, huuhaa iyo ha lagaa sheego, waxaa ugu weyn, in aad isu muujiso, wax aadan ahayn, waligaana noqon karin.
Qiiro, laablakac, caadifad, meeldhaw fiirin, maangaabnimo iyo xisaabtan la’aan, waa waxa Axmad Madoobe oo kale HOGGAAN nooga dhigay, haddana, aan wali ugu sii kadsoomaynno erayada jaban, tallaabooyinka qalloocan iyo tusmooyinka tolaysan.
Ma ahan wax Axmad Madoobe ku gaar ah, oo waxaa la wadaaga inta ku awrkacsata siyaasadda, si ay u fuliyaan dacamooda sedburi. Waa la buuxaa, waa la badan yahay. Axmad wuxuu dheer yahay hal arrin, oo aysan dadku ku baruurin, balse, mar walba, uu ku dhagro. Isaga ha ka soo fusho ama ha lagu la taliyee, oo ah qiiq is ku qarin.
Waxaa aad loo buunbuunshay, markii uu ka yiri madasha shirkii Muqdisho ka dhacay: “Haddeynu shir weyne Soomaaliyeed u fadhinno, goob Soomaaliyeed fadhinno, aaye eynu leenahay ka tashaneyno, dad Soomaaliyeedna la hadleyno, mexey madaxdu English iyo afqalaad ugu hadlaan? Miyeynaan ogeyn, in taasi jiritaanka afkeenna iyo dowladnimadeennaba lid ku tahay! Anigu waan qoraa, waana akhriyaa, ee English ma yaqaan yaan la igu xaman!” hadal aad u qurux badan, balse, inta aadan u qushuucin ka hor, horta Axmad Madoobe ma taqaan? Haddaad taqaan, wali xasuusto ma kuu shaqaysaa, mise, waa kaa dhimatay, may, kaa dantay?.
Marka laga soo tago sooyaalkiisa xun, dadku aad bay ugu riyaaqeen, sida ay ugu riyaaqeen, marka uu qaybta ka ahaa WADAADDADII WAALLIDA WADAY, balse, way ka hoos baxsan tahay, in ninkaa erayadaa leh, ee afka u doodaya, una damqanaya, magaalada uu madaxda ka yahay, XARUNTA JAAMACADDA KISMAAYO, ay xoog ku deggan yihiin ciidan ajnabi, oo isaga kursiga boobka ah, ee baarlamaanku ku tilmaamay sharcidarrada ku haya. Xarumihii waxbsharashada, goobihii aqoonta iyo fadhiyadii tacliinta, ayuu adreyda ka afqabanayaa, askar shisheeyana waa dejinayaa, deedna af ayaan u doodayaa, oo mid qalaad ayaan ka didayaa, ayuu ku leeyaahy. Waa ha la isku ciyaaro. Ogoow, ani afqalaadeyn u doodi maayee, waxaan ka digayaa, in daycaad iyo afgubaadsi na lagu ugaarsado! Ma kuu caddahay, in ay ii dheh tahay iyo dhugmi tirid?.
Mar kale, wuxuu amar ku bixiyey, in madasha shirka Kismaayo laga saaro calallada beelaha metela maamul goboleedyada. Dad baa u arkay tallaabo fiican, aadna u soo dhaweeyey, heer ay Axmad sida caadada eheed, ay ku abaalmarsheen billadda WADDANI! WADDANIYOOW XAAL QAADO, haddii Axmad Madoobe WADDANI yahay, qof aan WADDANI ahayn ma jiro ayaan filayaa! WADDANI ay garab iyo gabbaad u yihiin ciidan shisheeye, waliba ka la ehe, uusan la’aantiis magaalada milicsyo sii joogeen, anigu ma garan WADDANIMIADA lagu tilmaamayo.
Anigu tallaabadan u ma guuxin, is ka daa, in aan taageeree, ka hor, in aanan ku qancin. Way fududdahay, oo anigu maangal wixii ka soo hara, maskaxdayda ma galaan, ee ka warran, haddii ayba is burrin weyn ku dhexjirto? Ma filayo, in aad iga sugayso, wax aan ka ahayn, in aan ka sii dido, walina aan digniin iyo ka digid duldhigo, waana tana hoo, iga guddoon.
Kismaayo, waxaa joogaa ciidammo Keenyaan ah iyo Xabashi. Kuwa hore, soo geliddii hore, ee dalka, waxay eheed xadgudub, haddana, waxay u yimaadeen, in ay Axmad gacan ku siiyaan, sidii ay ugu qaban lahaayeen Kismaayo iyo Jubbooyinka, intaa waxaa u dheer, duqaymaha, xasuuqa, laynta iyo barakicinta ay sida wadajirka ah ugu hayaan Axmad iyo Keenyaanku, dadka deegaanka. Kuwa dambe, waxay xoog ku haystaan gobolka Gedo oo dhan, heer ay qofkii Axmad Madoobe is afdhaafaan jujuub ugu keenaan ama xukunka ka tuuraan. Xasuuso, Barre Hiiraale, xaggee ku dambeeyey? Ma rabitaankiisa ayuu meel ugu fadhiyaa, mise, wax ka weyn ayaa la tusay? Ku darso dhacdadii Xabshidu maamulka gobolka Gedo uga cayrisay madaxda gobolka, oo Axmad ay is khilaafeen.
Intaa kaliya ma ahan, inta lagu jiray shirka qabanqaabadiisa, ayaa waxaa magaalada Kismaayo gaaray ciidammo la yiri, waxay qayb ka yihiin ciidanka ammaanka madasha shirka sugaya. Soomaali ugu danayn ma ahyn, ee dan kale ayey ka lahaayeen. Waxaan daawaday, muuqaal laga soo duubay, AMXAARO tagtay magaalada Kismaayo, ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mid lagu sheegay wasiir (WACRAAR), oo la hadlaya, xubno ka tirsan ciidanka Xabashida ee yimid, ayaa wuxuu leeyahay; “Anagu waxaan qabnaa, in aan is leenahay!” Ku ma simine, wuxuu sii raacshay; “Waxaan aaminsan nahay, inaad timaaddeen qeyb dalkiina ka mid ah!” Qayb dalkiinna ka mid ah! Waa dalkee?!
Ma la yaabtay? Ma la qarracantay? Ma la amakaaktay? Ma la anfariirtay? Ma la dhakafaartay? Dhabannahays, ma kugu dhacday? Ma …. Ma…. Ma…. Ma…..
Waxaad ogaataa, ninka erayada sare ku HANTAATACAY, in shalay, maalmihii miyir la’aanta, ee WADAADDADA WAALLIDU WADDAY, ee MAXKAMADAHA, uu asoo hagoog guduudan madaxa ugu duuban tahay, uu Miqdisho joogay, oo diin dacareed iyo huuhaa safka hore kaga jiray!
Teeda kale, kiwii indhaha la’aa, uurkana ka bukay, ee marka aan Axmad Madoobe iyo kooxdiisa wax ka qoro, qabyaaladda ku tilmaami jirey, iguna leexin jiray qabiil, maanta magac ha noogu baxshaan arrintan, maxaanse ninkan iyo Cabdi Ileey, is ku hadal ka dhigeyn? May, miyeysan, is ku hadal ahayn, horta? Ka muhimsane, hadalladii Axmad Madoobe, ee aad u wada qiirooteen, ku qiyaasa kuwan, ma is qabanayaan?!
Ayaamuhu way qormayaan, aragxumada, iinta, iyo eedda, waxaa ka daran aayatiinxumada iyo abaal la’aanta. Halkan erayadii aan ku halqansan jiray oo dhan, mid ka qabta waayey, ee waa inaan erayo kale u raadsadaa!
Tallabada callalada looga saaray madasha shirka, ujeedkeedu wuxuu ahaa, in lagu daboolo dhacdadan, dadkana la halmaamsiiyo, balse, anigu ma halmaamin, Axmadna iga gadi maayo badeeco dhacsan. Muxuusan uga hadal hantaatacaa, oo uusan ugu yaraan isaga fogeyn? Muxuusan xilka uga xayuubin, kolleey dabadhilif la ma waayeene, oo uusan mid kale ugu badalin? Wali maxaysan uga hadal maamulka Jubbaland, oo ay uga aamusan yihiin? Hadda maxaa na loogu mashquulinayaa, calallao ayaa madasha shirka laga saaray?.
In ay been tahay iyo wax aan waxba ka jirin, anaa caddeynteed kuu haya, ee ku qanac ama qabiil is ku qaad. Carun shubkii u horreeyeye, ee Axmad Madoobe lagu carun shubo, ka sokow, in uu ka qayb galay, wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Tedros Adhanom, haddana, darbi walba, waxaa ku xardhanaa calanka Itoobiya iyo sawirka wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Tedros Adhanom! Haddaa, taasi maxay eheed? Maxaa isbadalay? Maxaa soo kordhay? Ma Axmad baa isbadalay? Ma filayo. Ma Xabashida ayaa isbadashay? Ha ka yaabin. Ma Soomaalida kale? Waxoogaa yar, oo sheekadan, waxaa loogu talagalay, in dhaqdhaaqyada looga soo horjeedo Xabashida iyo ciidanka Shisheeyey ee dalka jooga lagu shuuqiyo, maadaama, bilihii u dambeeyey, la dareemo codod badan, oo Xabashida ka dhan. Ani ahaan waxaanba u arkaa, in ay aragti Xabashi tahay, -anoo jecel, in aan qaldanaya- si ay ugu qariso, ceebeheeda badan iyo codadka dadka oo isa soo taraya. Caddayn kale hoo; Kismaayo, saw ma ahayn magaalada lagu gubay calankeenna, waliba intii uu ka arriminayey Axmad Madoobe? Maalintaa la gubay, muxuu ka dhahay? Muxuu tallaabo ka qaaday? Mise, Calan Xasan buu ahaa, marka waa in la gubaa? Iga ilaali qiirada fadlan.
Maalmo ka hor ayey eheed, markii uu cadaado tagay Axmad, ee dhankiisa laga muday calalka maamulkiisa, haddaa, hadda maxaa ku jaban, oo madasha looga saarayaa calallada kale? Ma garan. Hadday run ka tahay, maamulkiisu ha qaato go’aan ah, in ay is ka laalaan calalkaa, ugu yaraan, marka uu Axmad Madoobe, magaalooynka kale joogo, oo yuusan adeegsan calalka maamulkiisa, oo ha is ka diido. Ma ahan, in uu calanka Jamhuuriyadda adeegsado, maxaa yeelay, isagu madaxweyne ma ahan, ee waa madax gobol.
Qodobka kale, ee ku hoosjira tallabaada calallada waxay tahay, in afar habeen uu ku dhaxay magaalada Kismaayo wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Tedros Adhanom, oo ayba caado u tahay, mar walba, oo uu magaalada Kismaayo shir, carun shub iyo ka jiraan kulan, in uusan ka maqnaan, halka uusan tegin magaalooyinka kale, ee dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, oo inta badan shirarka higsigu ka dhacaan. Ma aan is weydiinnay, sababta keentay, in uu kaliya magaalada Kismaayo tago? Maxaa keenay, in uu afar habeen seexdo, oo uu sugo furitaanka shirka? Dabcan dib u dhac xaggeenna wuu jiray, balse, haddana, afar habeen Kismaayo u joog shir aan sidaa u sii buurnayn, waxay ku tusee, ujeedka loo keenay ciidanka Xabashida, ka hor shirku inta uusan furmun.
Shirku wuxuu ka dhacayaa magaalo ciidan shisheeye haysto, haddana, waxaa laga saarayaa calal beeli leedahay. Tolow, yaa daran, calalka beesha iyo ciidanka shisheeye? Ma ogtihiin, in Keenya, ay dekadda Kismaayo dhaqaaleheeda is ka gurato? Yaa daran, calal beel iyo dhaqaalaha magaalada, oo ciidan shisheeye qaato? Dhirta la gubo, waxaa laga dhoofiyaa Kismaayo, waxaana dhoofiya ciidan Keenyaan ah, haddaba, yaa daran, calal beel iyo ciidan shisheeye, oo dhirtaadii in la xaalufiyo ka sokow, haddana, dhoofinteeda isaga kaaga masuul ah? Labo dhib, dhir la gubay iyo dhaqaale la dhacay!
Hadal macaan iyo hawraar malab ah waa la dhihi yaqaan, balse, in fal, faallo iyo fiiro lagu lifaaqo na laga waa. Ii dheh, iga sheeg, dicaayad iyo borobogaando qof is ku muujinayo, ayey mar walba bulshadani ku barriqataa. Inta hadalkaaga iyo hawlahaagu ka la duwan yihiin, aaminaad ma lihid, ee ha lagaa ammaan helo af iyo addinba. Jirjirrooleyn, labo bogleeyn iyo labo codleyn waxaa ugu weyn, midda Axmad Madoobe uu ku hadaaqay, ee afka ku saabsan. Axmad Madoobe; calal beel iyo ciidan shisheeye yaa daran?!
Bulsho is ku garaad ah, is ku go’aan ah, is ku guddoon ah, is ku garasho ah, is ku is ku gunaanad ah, sidee ku gaaree, guul wacan? Ujeedku wuxuu yahay, inta dacaayad, ii dheh iyo is maqashii dadku RUN iyo DHAB moodayo, waxaa lagu hoosjirayaa mardadabada musuqa hadal iyo hoggaan. Ogoow, dhan walba, aqoon, ogaal, aqool, arag iyo agabba, waxaa ku socda, hormar ballaaran, marka laga reebo hoggaankeenna, oo aad mooddo, in uusan halkiisii ka dhaqaaqin, haddii uusan dib u laaban!
Dadkeygoow, maalin walba, yaan kii idin dulleeyey, idin dallaalay, idin duugay, idin dacareey, idin dib dhigay, uusan isaga kiin dhigin DUUB, inta hadal macaan idiin mariyo! Dubaakh walba, oo aan dux iyo iidaan lahayn, yaan doxorayaashu idin ku dagin! Alla maxaan maqlay erayga ah; hebel waa nin fiican, ee rag xun baa ku lammaansan! Goor ma ayaan ka xoroobaynaa, caqliyadda beriyeellidda iyo u qiilinta! Wixii qof falo, asaa falay, lammaane iyo la’aanba, ee qareen shaydaan, oon la dirsan ha noqon.
Waxaa aad iiga yaabiyey, walibana iga caraysiiyey, marka aan arkay, kuwo aqoon sheegaya iyo in ay dalka xog ogaal u yihiin, oo haddana u riyaaqaya, hantaataca iyo hadaaqa Axmad, kuna sheegaya, tallaabo wax ku ool ah, may aragti saliim ah! Intaa waxaa nooga daran, may, kaba liita, idinka nooga dhigaya ninkan oo kale HALYEEY! War hurdada ka kaca, oo indhaha fura, may, maanka mura. Indho furan, maankuse xiran yahay, waxba soo kordhin maayaane!
Previous Previous post: Warancadde walaalihii Waraabe ayey u ku noqdeen!
Next Next post: Heesta: Xeebta i gee